Waxbar gabadha oo ciribtir faqriga: Waa maxay doorka waalidiinta ee waxbarashada carruurtooda? (Taxanaha 4aad – dhegayso) – Radio Daljir
Waxbar gabadha oo ciribtir faqriga: Waa maxay doorka waalidiinta ee waxbarashada carruurtooda? (Taxanaha 4aad – dhegayso)
Seteembar 27, 2019 3:43 g 1
Asbuucan barnaamijka WAXBARASHADA waxa aan ku falaanqeyn doonnaa qodobada soo socda:
1. Waa maxay doorka waalidiinta iyo xiriirka ka dhexeeya waalidiinta iyo iskoolka, si waalidiintu ay uga qayb qaataan waxbarashada ubadkooda?
2. Waa maxay duruufaha sababi kara in hoos-u-dhac uu ku yimaado doorka waalidiinta ee waxbarashada caruurtooda, ma se waxaa jira cid kale oo buuxineysa doorka waalidiinta?
3. Sidee maamul ahaan iskooladu u suurogelin karaan in waalidinta lala socodsiiyo waxbarashada caruurtooda? Mise jiraan maalmo u cayiman waalidiinta oo la isugu yeero si loola socodsiiyo waxbarashada carrurtooda?
4. Waalidiintu ma in ay ayagu carruurtooda koriyaan baa mise waxa ay sugayaan in iskoolku carruurta u koriyo waxna u baro?
Talooyinkaaga nala qaybso, barnaamijka maantana hoos kaga bogo.
Maqaalo Kale 302 Wararka 20727
Baydhabo: Fursad shaqo- WFP -Programme Associate, Baidoa, Somalia
Daljir waa mahadsan tihiin
Waalidiinta badankooda ilmaha waxay schoolka ugu diraan inay iaygu dhbokooda ka nastaan kuwo badan oo naga midana xirir ficn lama laha scholada iyo dugsiyada
Anuu waxaan oran lahaa walidku waa inuu ilmaha la soceaa subax kasta xaalkiisa markuu schoolka ka yimaado in uu wax soo dhigtay iyo in kale , hadii si wada jira walidka iyo macalink xirir u sameyaan waxaa soo baxaya ilmo ka dhisan dhanka wax baradhada
U Jawaab Juu Buri halceliska